10 Siyaabood Oo Ninkaaga Aad Uga Dhigi Karto Mid Aad Kuu Jecel - Aayaha
10 Siyaabood Oo Ninkaaga Aad Uga Dhigi Karto Mid Aad Kuu Jecel
Aayaha editorNovember 15, 2018
Waxan idiin soo gudbineynaa 10 qaabood oo ninkaaga aad uga dhigi kartid mid aad kuu jecel.
Dadaal ku bixi sidaad u fahmi lahayd; ubaro ninkaaga sida aad naftaada u taqaanid oo kale waxay taasi kaa caawineysaa inuu si fudud kuu fahmo. Marka ay tan dhacdo ninkaaga way u fududaaneysaa inuu si weyn kuusii jeclaado.
Ha iska dhigin qofaan la fahmi karin
Haween farabadan ayaa naftooda ka dhiga mid ay adagtahay in lafahmo; waa wax aanan suurtagal ahayn inaad ninkaaga ka filatid inuu ogaado wax kasta oo kugu saabsan adigoon dadaal kubixin.
Ha u qaadan inuu ku qasbanyahay inuu ogaado tan mana ogaan karo. Naftaada ka dhig mid si fudud loo fahmi karo oo dareenkaaga tus ninkaaga.
Ha noqon qofaan laga farxi karin
Qaar kamid ah haweenka way adagtahay in laga farxiyo. Markaad ufududeysid inuu ku fahmo way fududahay inuu si weyn kuusii jeclaado. Sidoo kale qadari waxyaabaha uu kuu sameeyo taasoo keeneysa in waxyaabo intaas kabadan uu kuu sii sameeyo.
Sax balse haku qeylin
Qeylada waa dhaqan kaa fogeynaya ninkaaga. Sax ninkaaga, usheeg inuu qalad sameeyay balse haku qeylin.
Sida aad ugu saxday oo kale qaladkiisa, waa inaad ugu mahad celisaa waxyaabaha wanaagsan ee uu sameeyo. Marka aad sidaas sameysid waxaa fududaaneysa in ninaakaga uu jacayl xad dhaaf ah kuusii qaado, si kastaba marak aadan uga mahadcelin waxyaabaha uu sameeyo dareenkiisa ayay waxyeeleysaa.
Qof wanaagsan iska dhig
Haween badan ma yaqaanaan sida wax loo soo jiito iyo sida loo labisto, waxayna filayaan in raggooda ay iska sii amaanaan.
Haddii aad rabtid ammaan dhab ah oo ninkaaga ku amaano, isqurxi oo iswanaaji markaas wuuku jeclaanayaa wuuna ku qadarinayaa.
Wada sheekeysi wanaagsan
Ragga waa jecelyihiin haweenka la sheekeysta, wada sheekeysiga wanaagsan oo aad la qaadatid waa mid kuusoo dhoweynaya.
Sameey waxyaabah aad wada jeceshihiin
Tani waxay noqon kartaa mid adag balse waa muhiim. Haweenka badanaa ma garanayaan fikradda guud ee cafiska. Dabcan way adagtahay in qaladaadka qaar la hilmaamo balse micnaha cafiska ma ahan inaad maskaxdaada hal mar kawada saartid—- micnaheeda ayaa waxa uu yahay jooji waxyaabaha keenaya, sidoo kale micnaheeda ayaa ah dhacdooyinkii lasoo dhaafay dib ha usoo celin.
Mararka qaar soo wada waqti qaata adiga iyo seygaaga,usameey waxyaabo uusan filaneyn hadiyad iyo wixii lamid ah, taasi waa mid sii xoojineysa jacaylka uu kuu qabo.